विश्व ११ टिमबाट सन्दीपले वेष्ट इन्डिजविरुद्ध आज खेल्दै ! - विश्व ११ टिमबाट सन्दीपले वेष्ट इन्डिजविरुद्ध आज खेल्दै !
विश्व ११ टिमबाट सन्दीपले वेष्ट इन्डिजविरुद्ध आज खेल्दै !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, १७ जेठ, 07:42:55 AM
काठमाडौं । विश्व ११ टिममा अनुबन्धित हुने पहिलो नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले आज वेष्ट इन्डिजविरुद्ध खेल्दैछन् । इंगल्यान्डको लर्डस्मा आज राति हुने खेलमा सन्दीपले पहिलोपटक विश्व ११ टिमबाट खेल्न लागेका हुन् ।
खेल नेपाली समयअनुसार राति १० बजेर ४५ मिनेटमा सुरु हुने जनाइएको छ । सन्दीप आबद्ध रहेको विश्व ११ टिमको कप्तानी पूर्व पाकिस्तानका कप्तान साहिद अफ्रिदीले गर्दैछन् । टिममा सन्दीपसँगै कप्तान साहिद अफ्रिदी, तमिम इक्वाल, रासिद खान, सोयब मलिक, दिनेश कार्तीक, मिचेल म्याक्लागन, साम विलिङ्स, थिसारा परेरा, आदिल राशिद, मोहम्मद सामी र लुकी रोन्ची रहेका छन् ।
यसअघि आर्इपीएल क्रिकेटमा दिल्ली डेयरडेभिल्सबाट खेल्दै उनले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए । बंगलादेशका सकिब अल हसनले व्यक्तिगत कारण देखाउँदै विश्व ११ टिमबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिएपछि उनको स्थानमा सन्दीपले मौका पाएका हुन् ।
२०७५, १७ जेठ, 07:42:55 AM